Xidiga Atletico Ee Koke Oo Ka Hadlay Inuu Griezmann Tagayo Iyo Midka Dunida Ugu Fiican Messi & Ronaldo %
Koke Resurrecioón, xidiga khadka dhexe uga dheela qaranka Spain iyo waliba kooxda kubada cagta Athletico Madrid, oo wareysi dhinacyo badan ka hadlaya siiyay Idaacadda El Partidazo de COPE, ayaa wuxuu ka la hadlay waxyaabo badan.
Laacibkaan ayaa wuxuu ugu horeyn cadeeyay in uusan meelna uga socon kooxdiisa, uuna doonayo inuu kubada cagta ama guud ahaan mihnadiisa kubada cagta uu kusoo gaba gabeeyo, naadigaan ka dhisan caasimada wadanka Spain ee Madrid.
“Hada waxaan ku qanacsanahay halkaan, iyadana ayaana doonayaa inaan kusoo gaba gabeeyay xirfadeyda kubada cagta,” ayuu ku jawaabay Koke mar la weydiiyay hadii uu ku farax-sanahay Athletico Madrid misana uu ku qanacsan yahay.
Dhanka kale, xidigaan ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka saaxibkiisa Antione Griezmann, kaasoo si weyn loola xiriirinayo inuu ka tagayo Athletico, uuna kusoo biiri doono xili ciyaareedka soo aadan camaaliqada Spain, ee Barcelona.
“Hadii uu doonayo inuu sii joogo halkaan, waa uu ka dheeli doonaa halkaan, laakiin hadii aad halkaan tahay meel aysan ka go’neen waa inaad sii joogtaa,” ayuu hadalkiisa kusii daray xili uu umuuqday mid diidaan inuu si shaac baxsan kula taliyo inuu baxo.
Ugu dambeyn, Koke oo la weydiiyaymidka wanaagsan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, oo ah labadda ciyaaryahan oo ay uwaabsan tahay dunida kubada cagta Tobbankii sano ee lasoo dhaafay ayaa wuxuu codkiisa ku biiray kabtanka Argentina.
“Messi waa kan aduunka ugu fiican – Cristiano Ronaldo wuxuu ku guuleystay wax walba – Laakiin aniga waxaan jeclahay [Lionel] Messi,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Koke Resurrecioón, oo kamid ah Liiska xidigaha Spain ee wajahaysa Argentina iyo Germany.